सावधान ! दसैंतिहारमा बढ्न सक्छ चोरीरडकैती सचेत रहनुहाेस् । - imandarkhabar
सावधान ! दसैंतिहारमा बढ्न सक्छ चोरीरडकैती सचेत रहनुहाेस् ।
काठमाडौँ, हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको मुख्य चाड दसैं लागेसँगै सहरबजार तथा कार्यथलोबाट घर फर्किनेको चाप बढ्दो छ । कोरोना महामारीका बीच पनि काठमाडौं उपत्यकाबाट घर फर्किनेको ताँती रोकिएको छैन ।
काठमाडौंको गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कमा बुधबार घर फर्किन बसको टिकट खोज्दै पुगेका यात्रु । कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण यसपटक दसैंका लागि राजधानीबाट घर फर्कने यात्रु निकै कम छन् । गत वर्षको तुलनामा काठमाडौं उपत्यका छाड्नेको संख्या भने कम छ । अहिले दैनिक २५ देखि ३० हजार मानिस चाडपर्व मनाउन घर फर्किने गरेका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण सुनसान बनेका राजमार्ग र त्यस आसपासका होटलररेस्टुरेन्टमा पनि चहलपहल बढेको छ । यो क्रम हरेक वर्ष खासगरी दसैंतिहारका बेला देखिन्छ । पर्व मनाउन घर फर्किनेको संख्याले हर्ष, उल्लास र रमाइलोको पनि संकेत गर्छ । तर रमाइलोसँगै यो अवधिमा अपराधका घटना पनि बढ्न सक्छन् ।
सामान्यतया असोज र कात्तिकमा चाडपर्व पर्छन् । दसैं, तिहार, छठ, नेपाल संवत्लगायत पर्व मनाउने र परिवारसँग बसेर रमाइलो गर्दा घरका अन्य पाटोमा ध्यान नपुग्दा त्यसको फाइदा चोरीरडकैती गर्ने समूहले लिन सक्छन् । महानगरीय अपराध महाशाखाका एसएसपी दीपक थापाले घरबाहिर निस्किँदा वा पर्व मनाउन घर जाँदा त्यसको जानकारी बहालमा बस्ने भए घरधनी र छरछिमेकलाई दिएर मात्र जान सुझाव दिए । लामो यात्राका लागि निस्कनुपरे सम्भव भएसम्म नजिकैको प्रहरी कार्यालयलाई समेत जानकारी गराउन उनले सुझाए । दसैं र तिहारका बेला चोरी र लुटपाटका घटना बढी हुनसक्ने उनले बताए । त्यसमा पनि घरमा कोही नभएको मौका छोपेर चोर्ने समूह यो अवधिमा बढी सक्रिय हुन सक्ने अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । २०७५ र २०७६ मा दसैंतिहारको छेको पारेर घटेका चोरी र डकैतीजन्य अपराधको ग्राफ एकनासको छ । घटना पनि लगभग बराबरी जस्तै देखिन्छ । असोज र कात्तिकमा देशभर हुने अपराधको संख्या पनि उस्तै–उस्तै देखिन्छ ।
सोही वर्ष कात्तिकमा चोरीका २ सय ७० मुद्दा दर्ता भएकोमा साधारण चोरीका मात्रै २ सय १५ घटना थिए । डाँकाचोरीका ३१ घटना थिए । २०७६ असोजमा देशभर अपराधका ३ हजार ६ सय २९ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा चोरीका मात्रै २ सय २६ घटना घटेका थिए । यसमा पनि साधारण चोरीका १ सय ८१, डाँकाचोरीका १० र सवारी चोरीका १७ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । चोरीसम्बन्धी यो संख्या कुल अपराधको करिब ८ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै, गत वर्ष कात्तिकमा देशभर ३ हजार ७ सय ७६ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा चोरीका मात्रै २ सय ४२ मुद्दा थिए । गत वर्ष कात्तिकमा साधारण चोरीका २ सय ८ मुद्दा दर्ता भएका थिए । यो संख्या पनि कुल अपराधको करिब ८ प्रतिशत हो । प्रहरीका अनुसार चोरीमा संलग्न पेसेवर गिरोहले सांकेतिक भाषा प्रयोग गरेर अपराध गर्ने गरेको भेटिए पनि मानिस नभएको मौका छोपेर हुने चोरीमा भने फलामे रड, अन्य घरेलु हातहतियारलगायत प्रयोग हुने गरेका छन् ।दसैंतिहारमा बढ्न सक्छ चोरीरडकैती
चाडपर्व मनाउँदा र परिवारसँग रमाइलो गर्दा घरका अन्य पाटोमा ध्यान पुग्दैन । त्यसको फाइदा चोरीरडकैती गर्ने समूहले लिन सक्छन् । यस्तोमा विशेष सावधानी अपनाउन प्रहरीले सुझाएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।
Previous articleकर्णालीमा यसरी भयाे ओली पक्षको हार, महेन्द्रबहादुर जोगिए, गुलाबजंग गए !
Next articleकर्णालीकी चेलिकाे यती राम्राे टप्पा नाच,प्रचण्ड समेत हेरेकाे हेर्यै